Basaska iyo gaadiidka oo koronto ku shaqeeyaa waxay qiiqa & wasakhaynta hawada ka dhigaan eber - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Basaska iyo gaadiidka oo koronto ku shaqeeyaa waxay qiiqa & wasakhaynta hawada...
Basaska iyo gaadiidka oo koronto ku shaqeeyaa waxay qiiqa & wasakhaynta hawada ka dhigaan eber
Dalka Kenya, shirkad bilow ah oo lagu magacaabo Opibus ayaa ku hawlan hab & hammi lagu gaadhi karo nidaamka gaadiidka dadweynaha ee qiiqa & cimilo halaynta ka caagan.
Shirkaddu waxa ay ku hawlan tahay sidii ay mishiinnada korontada ugu beddeli lahayd mishiinada hadda naaftada iyo shidaalka ku socda, mishiinadaa korantada ah oo awood u leh in lagu safro in ka badan 250 kilomitir maalintii iyaga oo weliba kharashka aad u dhimaya. arintan darawalada gaadiidka dadweynaha ee dalka ayaa aad ugu faraxsan.
“Qiimaha Shidaalku aad buu qaali u yahay, lacag fiicanna ma samayn kartid, sababtoo ah waxa aad ku isticmaashaa Shidaal lacag badan, marka la barbar dhigo Baska Korontada ee soo socda, waxa aanu samayn doonaa lacag badan oo xataa qofka baska leh waxa uu helayaa lacag badan. ” ayuu yiri George Moses, oo ah darawal baska dadweynaha kexeeya oo ka shaqeeya Nairobi.
Iyadoo khataraha is-beddelka cimiladu ay sii kordhinayaan khatarta meeraha aadanuhu ku noolyahay sii halaynaya, qiiqa & kaarboonka baabuurta kasoo butaaca ayaa weli ah mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn.
Afrika guud ahaan way u nugushahay cawaaqib xumada ka dhalan karta, haddana marka la barbardhigo, guud ahaan wax aad u yar ayay ka geysatay kharibaada meeraha dhulka iyo hawadiisa. hayeeshee Filip Lovstrom waa aasaasaha OPIBUS.
“Waxa aanu saarna mishiinka shidaalka cuna ee qiiqa tuura, waxa aanu ku bedelaynaa mishiin koronto ah, ka dibna waxa aanu gelinaa batari iyo qaybta kontoroolka, taas oo macnaheedu yahay in aanu si kedis ah u tagin kaalin shidaal oo aanu u shidaalino basaska iyo gaadiidkayaga. baabuurta leh batrool ama naaftada,” ayuu ka hadlayaa.
Si kastaba ha ahaatee qiimaha dib-u-habaynta mishiinka ku shaqeeya shidaalka ee loo rogayo mishiinka korontada ayaa aad u sarreeya milkiilayaasha badan ee warshadaha gaadiidka dadweynaha.
Kharashku waa ku dhawaad ​​45 kun oo doolarka Maraykanka ah halka baska gacanta labaad ee Kenya la keeno uu inta badan ku kacaayo saddex meelood meel wax ka yar.
Qaybaha ugu badan ee basaska korontada ku shaqeeya waa in sidoo kale la keenaa Kenya iyadoo laga keenayo Yurub taas oo kordhinaysa kharashka.
Dowladda Kenya ayaa sidoo kale canshuur ka qaadaysa qeybaha korontada ee loo isticmaalo isku xidhka basaska korontada.
Iyada oo ay jiraan caqabado waaweyn oo hor leh oo haysta shirkaddaha, misna Silicon Valley Fund At One Ventures ayaa hoos u dhigtay $7.5 milyan si ay u maalgeliso Opibus, oo hadda ah shirkadda ugu weyn Afrika ee soo saarta baabuurta korontada.
Tani waxay keeni doontaa shirkadda baabuurta korantadu inay dhamaystirto wax ka beddelka 52 baabuur ee ugu horreeya ee rakaabka ah oo loo beddelo baabuur koronto buuxda ah Diseembar 2021.
Wax soo saar ballaaran oo ka badan 20,000 oo kale ayaa la soo saari doonaa si loo daboolo suuqa Afrika marka la gaaro 2023.
“Ma ahan in subax walba marka aan hurdada ka kacno aan eegno qiimaha shidaalka, laakiin dhab ahaantii waxaan wadnaa gawaari hoos u dhigaya qarashka badan ee ku baxa, in Kenya dal ahaan iyo shaqsi ahaan aan ka madax banaaneyno qiimaha shidaalka iyo in kale. dhanka qiiqa iyo diqoowga labadaba, ayuu yidhi Lovstrom.
Iyada oo wax laga beddelayo chassis-ka gaadhiga ee hore u jiray, Opibus waxa ay yaraynaysaa qiiqa kaarboonka ku dhawaad ​​100% iyada oo hoos u dhigaysa qiimaha shaqada ku dhawaad ​​60% maadaama basaska korontadu aanay u baahnayn saliid iyo shidaal qaali ah si ay wadada u sii hayaan.
In kasta oo darawallada baska ay rumaysan yihiin in ay ugu dambeyntii samayn karaan lacag badan, runta arrintu waa basaska korontadu maaha mid raqiis ah iyo baytariyada Lithium-ka ee caawiya socodka basaska waxay lumiyaan kharashka qiyaastii 2 boqolkiiba sannadkii.
Markaa 10 sano gudahood baska korontadu waxay u badan tahay inuu lumin doono boqolkiiba 20 awoodiisa, taasoo yaraynaysa masaafada uu ku safri karo.
Ugu dambeyntii baytariyada Lithium waxay u baahan doonaan beddelaad qaali ah waayo waxaa la tuuri doonaa baytariyadii hore ee Lithium waxay noqon kartaa caqabad kale oo deegaanka wax u dhinta.
Lithium, oo awalba loo baahday baahi badan, waa kheyraad xaddidan oo laga soo saaro dhulka taasoo ku kordhinaysa welwelka waxa dhacaya marka ay naga dhammaado.
Laakiin wakhtigan baabuurta korontadu waxay sii kordhayaa oo waxaa caan ka dhigay dadka deegaanka u ololeeya oo taageero weyn u haya.
Hoggaamiyeyaasha caalamka ee ku kulmaya Glasgow, ee ka xaajaysanaya isbeddelka Cimilada ee Qaramada Midoobay ee loogu magac daray COP26, kasbashada heshiis caalami ah oo ay waddamada xubnaha ka ah qaramada midoobay u hoggaansamaan si loo gaadho in qiiqa kaarboon-ka eber la gaadhsiiyo ayaa weli ah mid aan muuqan.
Heerkulka ayaa sii wadi doona inuu kordho, taasoo horseedi doonta dab aad u badan, daadad lama filaan ah, abaaro iyo hirar kulayl ah.
Sida laga soo xigtay Pamela Okutoyi, oo u dhaqdhaqaaqa deegaanka Eco-mindset, waxyeelada aan laga soo kaban karin ee meeraha ay u gaystaan ​​wadamada horumaray ayaa wali ku sii haya qaarada Afrika abaaro, iyo fatahaado.
“Waxaan la imaanaynaa tignoolajiyada naga caawinaysa ilaalinta deegaankeena, sidoo kalena hoos u dhigaya saamaynta isbedelka cimilada, tanina waa fariin ku socota caalamka oo dhan, tani waa fariin ku socota caalamka iyo wadamada kale ee ka baxsan Afrika, maaha oo kaliya tallaabo in laga qaado ee waa in tignoolajiyadooda la hubiyaa, waxa ay qabtaan,” ayuu ku booriyay Okutoyi.
Okutoyi sida qaar badan oo ka mid ah deegaan dhawrayaasha ee adduunka ayaa ku baaqaya in la dardargeliyo wax soo saarka baabuurta korontada si “loo hubiyo in aan helno deegaan nadiif ah, magaalo xasilloon iyo nidaam gaadiid oo aad u hufan”.
Previous articleUgu yaraan 20 caruur ah ayaa ku dhintay dab ka kacay iskuul kuyaal Niger
Next articleSaaka iyo twitterka Raisal-wasaaraha Itoobiya